★မြန်မာ့အလင်း★: မထုံနဲ့ မထိုင်းနဲ့
အထက်ကဗီဒီယိုက မြန်မာပြည်မှာ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာကို Al Jazeera ကနေ တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဗီဒီယိုကို မြင်တော့ ရှက်ကြမယ်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်မယ်။ ဦးသန်းရွှေကို မျက်စိထဲမှာ မြင်ပြီး မုန်းမယ်။ စစ်တပ်ကြောင့် အခုလိုဖြစ်တာဆိုပြီး ဒေါသထွက်မယ်။ (ရုရှကစစ်သားတွေကတော့ ဒီမိုသမားတွေ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့လို့ ဆိုပြီး ဒီမိုသမားတွေကို ဒေါသထွက်ကြမှာပါ။) တချို့လူငယ်တွေကတော့ ဘုရားတွေကိုပဲလှူဒါန်းနေလို့ အခုလိုဖြစ်တာလို့ ပြောသူတွေရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘုရားတောင် မလှူအောင်ပြောဆိုတာတွေရှိကြပါတယ်။ (အမှန်ကတော့ ဘုရားကိုလှူဒါန်းမှုတွေရှိနေလို့ သာသာနဟာ အခုလိုထွန်းတောက်နေပြီး.. တိုင်းပြည်ဟာ ငြိမ်းချမ်းမှုရှိနေတာပါ)
ကျုပ်တို့မြန်မာတွေက ပြဿနာဖြစ်ရင် အပြစ်တင်ဖို့ တရားခံကိုရှာဖွေတယ်။ ပြီးတော့ တရားခံကို အပြစ်တင်တယ်… အဲဒီအဆင့်မှာတင် ရပ်သွားတယ်။ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာ မစဉ်းစားဘူး။ တကယ်တော့ ပြဿနာရဲ့အရင်းခံဟာ ဦးသန်းရွှေမဟုတ်ဘူး။ ထို့အတူ ဒီမိုသမားတွေလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘုရားတွေကို လှူဒါန်းလို့လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကတရားခံဟာ အခုဆောင်းပါးဖတ်နေတဲ့ ခင်ဗျားပဲဖြစ်တယ်။ တနည်းအားဖြင့် မြန်မာတွေရဲ့ တာဝန်သိစိတ်ကင်းမဲ့မှုက အဓိကဖြစ်တယ်။ မြန်မာတွေဟာ အများအကျိုးကို လုံးဝစိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ အများအကျိုးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘေးကနေ လက်ပိုက်ကြည့်လိုကြပါတယ်။ ဘေးထိုင်ဘုပြော လုပ်ကြပါတယ်။ စက်တင်ဘာအရေးအခင်းတုံးကလည်း လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြသူက နည်းနည်းပဲရှိတယ်.. ဘေးကနေ လက်ခုတ်တီးတဲ့သူနဲ့ လက်ပိုက်ကြည့်နေသူက ပိုပြီးများခဲ့တယ်။ ဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာလည်း ငွေကြေး အခက်အခဲဖြစ်သူတွေ. . . အလုပ်အကိုင် အဆင်မပြေသူတွေကို ကူညီတဲ့သူမရှိပါဘူး။ နှုတ်နဲ့တောင် ကူညီတာမရှိတဲ့အပြင် . . . ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကို ကွယ်ရာမှာအပြစ်တင် စောက်တင်းပြောတာတွေ လုပ်ကြပါတယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့လူ့ဘောင်က တာဝန်သိစိတ်ရှိသူ အင်မတန်ကိုရှားပါးနေတယ်။ (အများအတွက် အနစ်နာခံရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ အတ္တနဲ့ ပရကို မျှတဖို့ ဆိုလိုချင်းပါ)
ခင်ဗျားတို့ဟာ နေ့စဉ် ကျောင်းစာအတွက် ၈နာရီကျော်ပေးတယ်၊ အလုပ် အတွက်လည်း နေ့စဉ် ၈ နာရီကျော်တယ်၊ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာတော့ မိသားစု၊ အပေါင်းအသင်းတွေကို ပေးတယ်။ ကျုပ်တို့မေးမယ်.. ဖြေကြည့်နော်။ ခင်ဗျားဟာ တစ်လမှာ… မြန်မာပြည်အတွက် အချိန်ဘယ်လောက် လုပ်အားပေးလဲ? တစ်လလုံးပေါင်းလို့ တစ်နာရီရှိလား? ၅ မိနစ်တောင်ရှိရဲ့လား? တစ်လလုံးမှာ အများအကျိုးအတွက် လုံးဝမလုပ်ဖြစ်ဘူး မဟုတ်လားဗျာ။
ခင်ဗျားတို့တွေ ဘယ်လောက်အထိ တာဝန်သိစိတ်ကင်းမဲ့လည်းဆိုတာ ကျုပ်တို့ပြောပြမယ်။ ကျုပ်တို့ဆိုရင် အလုပ်ထဲမှာတောင် မွတ်ဆလင်အမြစ်ဖြုတ်ရေးနဲ့ တိုင်းပြည်အရေးအတွက် စဉ်းစားတွေးခေါ်တယ်။ မိသားစုတို့ ရည်းစားတို့ဆိုတာ အချိန်ပိုမှပေးတာ။ ဒီဘလော့ကို အချိန် ဘယ်လောက်ပေးပြီး လုပ်နေလဲဆိုတာ ဆောင်းပါးအရေအတွက်နဲ့ တွက်ကြည့်ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ကျုပ်တို့တွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက် ကော်မန့်မှာ အားပေးစကားပြောဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားလုပ်နေတဲ့အလျှောက် ခင်ဗျားတို့ဘက်ကလည်း နည်းနည်းပါးပါးတော့ ကူညီဖို့မျှော်လင့်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် လူလေး ၃ ယောက်ပဲ ကော်မန့်မှာ စာရေးသွားတယ်။ အများစုဟာ ဘေးကနေ လက်ပိုက်ပြီးကြည့်ခဲ့တယ်။ တကယ်ကို ထုံထုံထိုင်းထိုင်းကြီးတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကို စော်ကားခံရလို့လည်း နာရမှန်းမသိ။ ဘာသာရေးအတွက်လည်း ခံစားချက်မရှိ။ နိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဘာမှမကူညီ။ ဘလော့တကာလှည့်ပြီး နအဖနဲ့ ဒီမိုသမားတွေ ဘယ်လိုရန်ဖြစ်နေလဲ ဆိုတာပဲ စပ်စုကြတယ်။ (စပ်စုတာကိုပဲ လေ့လာတယ်လို့ စာလုံးလှလှသုံးထားကြတယ်) ကျုပ်တို့တောင်းဆိုတဲ့ ကော်မန့်လေးရေးဖို့က ခင်ဗျားအတွက် ဘယ်လောက် အပန်းကြီးတဲ့ ကိစ္စမိုလို့လဲ?
ကျုပ်တို့နိုင်ငံဆင်းရဲနေတာ ဦးသန်းရွှေနဲ့ ဒီမိုသမားတွေကိုပဲ အပြစ်တင်လို့မရဘူး။ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ ခေါင်းဆောင်မှာပဲ တာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူး. . . ကျုပ်တို့လူ့ဘောင်အတွင်းမှာ အကျင့်ပျက်နေတာကို ပြုပြင်မှဖြစ်မယ်။ ခင်ဗျားတို့တွေ ထုံထုံကြီးလုပ်နေမယ် ဆိုရင်တော့ အခုလိုပဲ စုတ်ပြတ်နေဦးမှာပဲ။ ပွဲကြည့်နေသလို လက်ပိုက်ကြည့် မနေပါနဲ့တော့။ ထို့အတူပဲ . . . ကိုယ့်အဖိုးရွယ် ဦးသန်းရွှေကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ ကိုယ့်အဖေအရွယ် ဒီမိုခေါင်းဆောင်တွေကိုလဲ အပြစ်မတင်ပါနဲ့။ ကျုပ်တို့တွေ တစ်လကို ၃-၄နာရီလောက် အများအကျိုးအတွက် လုပ်အားပေးကြပါ။ အဲလောက်လေးလုပ်ရင်ကို အများကြီးပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်ယုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ပြောသင့်တာပြောပါ။ လုပ်သင့်တာလုပ်ပါ။ ကူညီသင့်တာကို ကူညီပါ။ ထို့အတူပဲ မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုလည်း ငွေအား.. လူအား တတ်စွမ်းသမျှ ကူညီကြပါဗျာ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 11:56 AM